Thwebula Wink 2.0.1060 – Vessoft
Screen bamba, Graphics and design
Wink – a isofthiwe enamandla ukuba adale tutorials kanye nezethulo. Wink kwenza ukuba liyobamba sikrini, uzitholele isinyathelo incazelo by step, ukudala ukulandelana navigation izinkinobho, ukubambezeleka, sematheni njll software ikuvumela ukuba adale flash-video noma intshumayelo PDF and exe amafomethi. Wink isekela kudalwa izifanekiso kwenza ukusebenzisa amafayela image of takhiwo ezahlukene njengoba material input. Isofthiwe ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa
Kudala tutorials kanye nezethulo
Kugcinwa of amaphrojekthi exe and PDF takhiwo
Amazwana on Wink:
Wink Ahlobene software:
Open Broadcaster Software 17 futhi 0.659b
English, Español, Deutsch, 中文... Format Factory 4
Abadlali Media The kulula ukuyisebenzisa player audio. Isofthiwe isekela takhiwo eziningi alalelwayo kwenza ukufaka izingxenye ezengeziwe ukusebenza kanye amafayela alalelwayo.